Warqad Gundhig ah - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
You are here: Bogga ugu weyn / Waraaqda Taariikhda
Waxaan ku adkaysan doonnaa xuquuqda aadanaha ee dadka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa galmoodka ka shaqeeya. Ma jiraan wax kale oo la aqbali karo markay tahay arrin run ahaanta anshaxa guud."
Mudane. Michael Kirby AC CMG.
Waraaqda asalka ah ayaa waliba loo heli karaa si loo arko oo loo soo dejiyo sida PDF ah.
Halkan ka daawo / Download PDF halkaan
Sharciga Farsamaynta Galmada ee Victoria
Wershadaha Labada Nooc ee Galmada
Shaqada Jinsiga ee Wadada Ku Saleysan
Ragga, Shaqaalaha Trans and Non Binary Work Workers
Ka ganacsiga dadka iyo addoonsiga casriga ah
Asturnaanta iyo ka ilaalinta takoorka
Kormeerida iyo Kormeerka Warshadaha Jinsiga ee Xukunka Gaarka ah
Caawinaada Shaqaalaha Galmada
Sharciga Dawlada Dhexe
sharciyo ay dejiso Dowladda Federalka ee Australiya oo loogu talagalay Australia oo dhan. Shuruucda shaqada galmada ee Australia ma aha Dawlada Dhexe.
jebinta sharciga dembiyada. Xawaaladaha sharci darrada ah waxaa sidoo kale lagu qeexi karaa inay yihiin sharci-darro.
u hogaansanaanta sharciga dembiyada. Ku dhawaad ​​dhammaan shuruucda shaqada galmada ee Fiktooriya waa sharciyo dambi. Geela shati leh ayaa sidoo kale lagu qeexi karaa inay yihiin sharciyeyaal sharci ah.
Hay'adaha shattiga leh ee shatiga leh ama hay'adaha weheliya waxaa sidoo kale lagu sharxi karaa inay yihiin sharciyeyaal sharci ah ama wakaalado wehel ah.
ereyga dhillo waxaa loo isticmaalaa oo keliya halka eraygan loogu adeegsaday dukumiintiyo kale oo taariikhi ah.
Galmada iyo jinsiga
Jinsi uu qof ku garto. Tusaalooyinka qaarkood waa lab / dheddig, lab-lab, dheddig iyo lab. Galmadu waa calaamad bayoolaji - lab ama dhadig - oo loo xilsaaray cunug cusub oo ku saleysan muuqaalka xubnaha taranka. Waxay qeexaysaa astaamaha noolaha mana aha wax la mid ah jinsi. Jinsiga iyo lab / dheddig waxaa loo isticmaali karaa si isweydaarsi leh dukumintigan, gaar ahaan marka la xiganayo ama tixraacaya cilmi baaris hore.
Hay'adaha sharci darrada ah ee aan shatiga lahayn ama hay'adaha weheliya waxaa sidoo kale lagu sharxi karaa inay yihiin sharci-darrooyin sharci-darro ah ama hay'adaha weheliya.
Maamulka Fiktooriya ee nidaamiya caafimaadka iyo badbaadada shaqada.
Dawlada Fiktooriya ayaa ka codsatay hogaamiyaha xisbiga Party iyo xubin ka tirsan baarlamaanka Fiona Patten inay hogaamiyaan dib u eegis lagu sameeyo sida loo xakameeyo shaqada galmo ee Victoria. Waxay u gudbin doontaa dowladda bisha Sebtember 2020 kadib markay tixgaliso:
Dhammaan noocyada shaqada galmada, oo ay kujiraan shaqada galmada ee ganacsiga galmada iyo wakaalada badbaadada, adeegyada galmada ee lagu bixiyo qolka duugista iyo meheradaha la midka ah, shaqada galmada ee ganacsatada yar yari ka shaqeeyaan, iyo shaqada galmada ee salka ku haysa;
Nabdoonaanta goobta shaqada oo ay ku jiraan arrimaha caafimaadka iyo badbaadada iyo ceebta iyo takoorka ka dhanka ah shaqaalaha galmada;
Shuruudaha sharci u dejinta hawlwadeennada ganacsiga galmada ee ganacsiga;
Awoodda sharci fulinta ayaa looga baahan yahay inay wax ka qabato falalka dambiga ah ee ku dhaca wershadaha shaqada galmada, oo ay ku jiraan qasab, dhiig-miirasho, deyn deyn iyo addoonsiga;
Ammaanada deegaanka iyo goobta dhismayaasha bixiya adeegyada galmada iyo shaqada galmada ee ku saleysan wadada;
Dhiirrigelinta caafimaadka bulshada iyo sharciyo ku habboon oo ku saabsan xayeysiinta shaqada galmada
Badbaadada iyo samaqabka shaqaalaha galmada, oo ay kujirto khibradda rabshadaha ee ka soo baxa shaqada galmada iyo natiijada ka dhalata;
Waxay ballanqaad u tahay in dowladdu ay weydiisatay talo ka socota Dib-u-eegista ku saabsan sida loo xakameeyo shaqada galmo ee Victoria halkii laga yeeli lahaa in la gooyo iyo in kale. Tani waa sababta oo ah mar horeba waxaa jira caddeyn adag oo muujineysa in sida ugu wanaagsan ee lagu xakameeyo shaqada galmada aysan la mid ahayn sharciga dembiyada laakiin leh xeerarka ganacsiga caadiga ah. Waa lama huraan in xeerarkaas ay yihiin kuwa habboon oo caddaalad ah, oo ay tixgeliyaan baahiyaha dhabta ah ee shaqaalaha galmada.
Tani waxay ka dhigaysa mid muhiim u ah shaqaalaha galmada inay fikradooda ka dhiibtaan waxa ay ka doonayaan dibuhabaynta sharciga iyo shuruucda ay u malaynayaan inay fulin karaan shaqaalaha galmada aadanaha iyo shaqaaluhu inay xaq u leeyihiin inay si nabadgelyo leh uga shaqeeyaan oo ay ka madax banaanaadaan takoorida, rabshadaha iyo ka faa'iidaysiga.
Waraaqdani waxay soo koobeysaa qaar ka mid ah arrimaha murugsan iyo wada sheekaysiga ku saabsan sida loo xakameeyo shaqada galmo ee Fiktooriya. Waxaa loogu talagalay inay noqdaan macluumaadka asalka u ah shaqaalaha galmada iyo xulafada doonaya macluumaad dheeri ah si ay ugu biiraan wadahadalka ku saabsan waxa ay shaqaalaha galmada doonayaan. Waxaa laga soo sawiray, si dhakhso leh, qalab fara badan oo kala duwan oo ku saabsan warshadaha galmada ee Fiktooriya, kuwaas oo ku taxan dhamaadka. Maaha dukumenti tacliineed oo la tixraacay, hage loogu talagalay sharciga shaqada galmoodka ama qawaaniinta, ama bayaanka siyaasada ama aragtida urur ama shaqsi kasta. Wixii macluumaad sharci ah ee la xaqiijiyey oo faahfaahsan ama ilaha dhameystiran ee akhristayaasha shaqada galmada waxay booqan karaan bogagga shabakadda ee Arrimaha Macaamiisha, Scarlet Alliance, Reform Work Reform Victoria iyo RhED (oo ah barnaamijka Star Health), kuwaas oo waliba liistada ku taxan dhamaadka.
Sanadkii 1985, shaqada galmada waxaa qayb ahaan sharci ahaan laga dhigay Fiktooriya iyadoo la adeegsanayo Sharciga Qorsheynta (Brothels), kaasoo sharciyeynayey dhillooyinka oo xadidey goobtooda. Ka dib markii ay weheliso Baaritaan dowladeed oo ay hogaamineyso Dr Marcia Neave, waxaa la soo saaray Xeerka Xukunka dhillooyinka ee 1986. Sanadkii 1993, baaritaan kale ayaa horseeday soo bandhigida Sharciga xakamaynta dhillooyinka 1994, kaas oo markii hore ka dhigay sharciyeeysi sharciyeysan haddii ay haystaan ​​ogolaansho qorsheyn, laakiin markii dambe ayaa la soo saaray nidaam shati u siiya dhillooyinka iyo hay'adaha ilaaliya, iyo in shaqaalaha galmada ee madaxa bannaan ay qasab tahay inay iska diiwaangeliyaan inay shaqeeyaan si sharci ah. Shuruucda ka dhanka ah shaqada galmada ee ku saleysan wadooyinka ayaa la gaarsiiyay macaamiisha, booliska waxaa lasiiyay awood dheeri ah oo ay ku dhaqaaqi karaan shaqaalaha ku saleysan wadooyinka. Qof kasta oo laga helo guri sharciyeysin oo aan ruqsad ka haysan ama iibiya adeegyada galmada isagoo aan la diiwaangelin ayaa sidoo kale la ciqaabi doonaa. Tani waxay u kala qaybiyey warshadaha galmada laba qaybood oo kala duwan - waaxda sharciyeysan, qaybta sharciga iyo waaxda sharci darrada ah ee aan sharciyeysnayn.
Xeerka Shaqada Jinsiga ayaa fasaxaya qawaaniin kala duwan oo loogu talagalay warshadaha galmada ee si gaar ah loogu dhex jiro Xeerarka Shaqada Jinsiga ee 2016 (Vic). Xeerarku way ka faahfaahsan yihiin sharciga waana la cusboonaysiin karaa marar badan sababta oo ah maaha inay baarlamaanka galaan. Tusaale ahaan, qawaaniinta 2016 waxay dejiyeen shuruudaha amniga ee ganacsiyada shaqada galmoodka ah, xeerarka la xiriira ku habboonaanta codsadayaasha liisanka iyo sida dhillooyinka iyo shaqaalaha gaarka loo leeyahay ay xayeysiin karaan. Sharciga wuxuu ka dhigayaa dambi in lala shaqeeyo STI sharcigana waxaa ku liis gareeya STIs ee ay quseyso.
Dukaan loo yaqaan 'brothel' waa goob kasta oo loo diyaariyey ujeedka shaqada galmada. Waxaa jira laba nooc oo sharciyeynta sharciga ah, kuwa leh liisamo iyo kuwa loo diiwaangaliyay inay ka reeban yihiin rukhsad bixinta. Labaduba waa inay ka helaan Ogolaanshaha Qorshaynta Golaha.
Buugaagta oo ka kooban illaa lix qol waxaa oggolaanaya Hay'adda Ruqsadda Siinta Ganacsiga (BLA). Shuruudaha liisanka waxaa ka mid ah milkiilaha iyo maareeyayaashu inay dabeecad wanaagsan leeyihiin oo ka mid ah kuwaan la joogo markasta, iyo sidoo kale xaaladaha shaqada qaarkood oo ay ka mid yihiin:
qaybaha saddexaad waa inaysan been ka sheegin tayada shaqaalaha galmada ama ay gorgortan geliyaan adeegyada galmada iyagoo matalaya;
Soo-dhaweynta ayaa ka duwan maamulayaasha la ogolaaday. Maamulayaasha la ogolaaday waa inay codsadaan laysanka iyagoo adeegsanaya BLA iyo dhamaan shirkadaha leysinka shatiga leh waa inay lahaadaan hal maamule la ogolaaday halkii saacba;
nidaam ayaa jira si loo hubiyo badbaadada dadka shaqada ka taga iyo kuwa la socda;
qolalka oo dhami waxay leeyihiin qaylo qarsoon, laydh ku filan oo awood u siinaya kontarooyinka STI iyo saxiixa galmada aaminka ah ee aagga soo dhaweynta iyo dhammaan qolalka loo isticmaalo shaqada galmada;
shaqaalaha galmada waxaa la siiyaa adeegsi bilaash ah oo kondhom iyo saliid biyo ku saleysan;
shaqaalaha galmada loogama baahna inay nadiifiyaan ama jeermiga ku maydhaan qubayska, qubayska, musqusha ama isbeerimida goobta ilamaa adeegyadan galmadaas adeegsadeen.
Yar yari, mulkiilaha ka shaqeeya
Meesha hal ama laba shaqaale jinsi ka shaqeeyaan goobahooda yaryar, looma baahna inay helaan laysan laakiin waa inay iska diiwaangeliyaan BLA 'bixiyaha adeegga adeegga galmada bilaashka ah'. Diiwaangelintani waxay ku lug leedahay bixinta magacyada iyo cinwaanada dhabta ah ee codsadayaasha; Oggolaanshaha qoran ee milkiilaha; iyo qorsheynta ogolaanshaha Golaha ama go'aanka Maxkamadda Maamulka iyo Maamulka Fiktooriya haddii rafcaan loo baahdo. Shuruudaha noocan oo kale ah ayaa ka dhigaya samaynta warqad ka reeban oo noqonaysa hawl qabad leh isla markaana u dhaqma sidii tallaabo aan loo baahnayn. Shirkadaha yar yar si ay u shaqeeyaan ayadoon lahayn qawaaniin dowladeed waxay dib u qeexi kartaa qashin yar meel ay 3 ama in kabadan oo shaqaale jinsi ah ay ku shaqeeyaan.
Brothels aan ruqsad haysan
In kasta oo tirada saxda ah ee shatiyeyaasha shatiga aan sharciyeysnayn ee ka hawlgala Fiktooriya aan la aqoon, haddana waxaa jira boqolaal boqolaal ah oo noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo ka jira guud ahaan gobolka. Waa dembi in la hawlgalo ama lagu dhex jiro galmood sharci darro ah, sidaa darteed shaqaalaha, macaamiisha iyo maareeyayaasha dhammaantood waa la dacwayn karaa. Ayadoo ay ugu wacan tahay cabsi laga qabo in maxkamad la soo taago ama ganaax, shaqaalaha ku jira guryaha sharci darrada ah ee aan shatiga laheyn waxay la kulmaan carqalado helitaanka macluumaadka badbaadada galmoodka iyo qalabka iyo adeegyada taageerada. Booliiska iyo garsoorayaasha waxay leeyihiin awoodo gaar ah oo ay ku hubinayaan in sharciga ka dhanka ah dhillooyinka aan sharciyeysnayn la dhaqan gelin karo.
Sharcigu wuxuu abuuraa afar nooc oo sharci darro ah -
haddii kale ganacsiyada sharciga ah ee galmo la bixiyo ay tahay mid aan rasmi ahayn;
ganacsatada aan buuxin shuruudaha shatiga iyo / ama shuruudaha qorsheynta;
dhismayaasha gaarka loo leeyahay ee aan ka diiwaangashanayn sidii bixiyeyaal ka reeban iyo;
hoteelo si ula kac ah u kireeya qolal loogu talagalay galmada ganacsiga.
Shaqaalaha galmada waxay si sharci ah u booqan karaan macaamiisha guryahooda ama hoteellada, iwm, haddii ay iska diiwaangeliyaan oo ay helaan lambarka SWA (Sex Work Act). Si taas loo sameeyo, shaqaalaha galmada waa inay siiyaan Hay'adda Ruqsada Siinta Meheradda aqoonsigooda shaqsiyeed, oo ay kujirto sawir goobjoog ah. In kasta oo diiwaannadaasi aysan ahayn kuwa guud, hadana waa kuwo joogto ah, waxaana heli kara booliska, Waaxda Arimaha Gudaha iyo Xafiiska Canshuuraha ee Australia.
Hay'adaha baxsadka waa in sidoo kale shati la siiyaa. Sida loo yaqaan 'brothels', shaqaalaha wakaaladu weheliso uma baahna lambar SWA oo waa inay u hoggaansamaan shuruudaha caafimaadka iyo badbaadada sidoo kale. Qaarkood waxay gaar u yihiin qaylada, sida shuruudda ah in shati-bixiye ama maareeye uu weli la xiriiro shaqaalaha galmada inta ay booqanayaan macaamiisha. Ficil ahaan, haddii ay tani dhacdo ama aysan dhicin waxay ku xiran tahay anshaxa hawlwadeenka wakaaladda badbaadinta halkii laga fulin lahaa fulinta sharciga. Kala-sooca ayaa macnaheedu noqonayaa in shaqaalaha galmada ay ku arki karaan macaamiisha meesha ay doonaan. Kedisyadu waa dabiicad qatar ah (shaqaale kasta) sidaa darteed waa wax aan la aqbali karin sharciga inuu sharci ka dhigo iyadoo macaamiisha loo geynaayo meel ay maamusho shaqaalaha galmada ma aha.
Iibsashada ama iibinta galmada wadada waxaa ka mamnuuc ah sharciga ka soo horjeedsiga tuurista, go'itaanka iyo ku soo uruurinta goobaha dadweynaha. Sharciga ayaa khuseeya iibsashada iyo iibinta galmada labadaba. Xeerka Shaqada Jinsiga ayaa sidoo kale awood siinaya booliska si ay uga mamnuucaan dadka aagga muddo 72 saacadood ah halkaasoo sarkaalku uga shakiyo inuu qof dambiile yahay.
Sharciga ka dhigaya meel kasta oo loo isticmaalo galmada inay ka dhigto mid sharci darro ah haddii aanu lahayn liisan ka horjoogsada shaqaalaha galmada inay ka kiraystaan ​​qolalka hoteellada ama aqal ay macaamiisha ay kula kulmaan dadweynaha. Tan macnaheedu waa in adeegyada galmadu ay ka dhacaan meelaha aan aaminka ahayn sida gawaarida iyo meelaha dadweynaha ee go'doonsan.
Shaqada ku saleysan wadada ayaa ka kooban qayb yar oo ka mid ah warshadaha galmada, laga yaabee ilaa 2% oo keliya, laakiin waxay soo jiidanaysaa fiiro gaar ah oo fiiro gaar ah. Shaqaalaha ku saleysan wadooyinka ayaa waxaa kufsaday dhaleecaynta khiyaanooyinka iyo deegaanka ay bartilmaameedsadaan xooggaga foosha xun. Xaqiiqdii, iibinta galmada ee wadada waxay siisaa ikhtiyaar deg deg ah dumarka leh hoy la’aan, dhibaato caafimaad ama arrimaha la xiriira isticmaalka maandooriyaha. Laakiin qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha cis iyo transwomen (shaqada galmada ee ragga ku saleysan jidadka oo si ba'an u baaba'day) ayaa tilmaamaya in shaqada jidadka caadiga ahi ay leedahay faa'iidooyin cad oo ay ka mid yihiin saacadaha shaqada ee la beddeli karo, aan la siinin guddiyada maamulayaasha iyo kaliya inay qabtaan 'dhakhso' halkii ay ka ahaan lahaayeen shaqooyinka saacaddii.
Waxaa jiray ololeyaal iyo mashruucyo badan oo ay sameeyeen booliis, golaha, shaqada bulshada iyo hay'adaha caafimaadka si wax looga qabto shaqada jidadka ee St Kilda. Heerarka fulinta sharciga iyo adeegyada loogu talagalay shaqaalaha galmoodka ku-saleysan ee wadooyinka ayaa kala duwanaa sannadihii la soo dhaafay iyo shuruucda ka-hortagga asluubta looma isticmaalo si joogto ah. Waxaa jira tiro ka yar shaqaalaha kufsiga-ku-saleysan-ka shaqeeya hadda oo shaqeeya marka loo eego markii xukunnadu caadi ahaayeen. Tani waxay la jaanqaadeysaa isbeddellada caalamiga ah ee ka fog goobaha dadweynaha ee galmada, oo badanaa loo aaneeyo kororka teknolojiyadda dijitaalka ah.
In kasta oo dadka deegaanku ay xaq u leeyihiin in ay soo bandhigaan walaacyada ku saabsan amni darrada guud, ma jiraan wax caddeyn ah oo sheegaya in sharciyada ka dhanka ah shaqada galmada ee ku saleysan jinsiga ay wanaajinayaan. Waxa hagaajiya jaangooyooyinka maxalliga ah ee bulsho kaladuwan waa nalal wanaagsan, tas-hiilaad iyo adeegyo maxalli ah oo la heli karo iyo xarumaha dadka laga tago, dhammaantoodna waxay caddeeyeen inay wax ku ool yihiin yaraynta dhibaatooyinka la xiriira shaqada galmada ee ku-saleysan waddada. Ujeedada xun ee cudurka 'Ugly Mugs', tusaale ahaan, waa aalad wax ku ool ah oo ka hortagga rabshadaha, iyo isweydaarsiga cirbadaha iyo sahayda cinjirka ayaa runtii gacan ka geysatay in bulshada laga ilaaliyo STIs iyo HIV. Shaki kuma jiro in Dib-u-eegistu ay ka maqli doonto ururada maxalliga ah ee ka shaqeeya barnaamijyada loogu talagalay shaqaalaha galmada ee shaqadooda curyaamiyey, aan lagu caawin, dambi.
Gobolka oo dhan, arrimaha murugsan waxay saameeyaan dadka nugul maxaa yeelay waxay la nool yihiin saboolnimo oo had iyo jeer ay hogaamiyaan arrimaha caafimaadka maskaxda, hoy la’aan, rabshadaha qoyska ama arrimaha isticmaalka maandooriyaha; ama asal ahaan ama naafo ah. Qaybo aad u yar oo ka mid ah dadkan tirada badan, arrimahan waxay xiriir la leeyihiin shaqada galmada ee St Kilda. Tan macnaheedu waa in ujeeddada kor loogu qaadayo badbaadada iyo samaqabka shaqaalaha ku saleysan waddada aysan ahayn oo keliya arrimaha maxalliga ah. Ugu dambeyntiina, waxay ku xiran tahay dowladda inay horumariso siyaasadaha dhaqaalaha iyo bulshada si loo ballaariyo helitaanka guryaha dadweynaha, adeegyada caafimaadka dhimirka, daweynta daroogada iyo dhaqancelinta iyo taageerada rabshadaha galmada.
Sannadkii 1984, Victoria Police waxay ku adkaysatay in haddii caruusadu ay sharci noqon lahayd, ay qasab tahay in la sharciyeeyo. Maamulka caafimaadka ayaa ku adkeystay in haddii shaqada galmada ay noqon laheyd mid sharci ah, shaqaalaha galmada waa in la sameeyaa si ay u xaadiraan xarumaha caafimaadka galmada. Shaqaalaha galmada waxay dowladda uga digayaan in haddii shaqada galmada ay qeyb ahaan sharci tahay oo noocyadaas sharciga ah ee la xiriira takoorka la soo bandhigo, Victoria waax weyn oo sharci darro ah ayaa ka soo baxda. Taasi waa sax wixii dhacay sida ay sheegtay Marcia Neave, oo ah gudoomiye ku-xigeenka baaritaanka 1985 ee shaqada galmada. Waxay qeexday isku darka shaqada galmada sharciga iyo sharci darrada ah ee ka soo baxday Fiktooriya '' patchwork patillwork 'ah.
Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha galmada ayaa u hoggaansamaya rukhsad u siinta shatiga sharci-darrada ah iyo xeerarka shaqaalaha gaarka loo leeyahay - laakiin kuma filna in nidaamku uu noqdo mid guuleystay. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha galmada waxay leeyihiin sababa aysan u shaqeyn karin ama aysan ugu shaqeyn karin warshadaha sharciyeeysan. Hawsha hadda jirta ee noqota 'sharci' adoo ka hela shaqo ka hawl gala ama wakaalado weheliya ama iska diiwaangeliya naftaada waa mid aad u dhib badan, khatar ama qaali ah, qaasatan dhalinyarada iyo kuwa qorsheynaya inay kaliya shaqo gaabin. Ka shaqeynta waaxda aan sharciyeysnayn, shaqaalaha galmada waxay ka fogaan karaan magacyadooda in la qoro; ka shaqeynta meelaha go'doonsan, bixinta guddiyada sicir bararka ee hawl wadeenada kalluumeysiga, u adkaysiga xaaladaha shaqo ee dulmiga ah oo ay ka mid tahay shaqada aan mushaharka la siinin; Jeegaga fiisada iyo / ama ku lug lahaanshaha iyo baadhitaanka STI iyo HIV.
Qaar ka mid ah shaqaalaha galmada waxay ku adag tahay inay boos ka helaan waaxda sharciga. Tan waxaa ka mid noqon kara soogalootiga aan sharciga lahayn, haweenka waayeelka ah, ardayda caalamiga ah, haweenka, dumarka leh arrimaha isticmaalka maandooriyaha iyo dadka la nool HIV. Awood la'aanta inaad ka shaqeyso waaxda sharciga waxay micnaheedu noqon kartaa ka shaqeynta duruufaha iyaga qatar gelinaya khatarta sii kordheysa ee rabshadaha iyo ka faa'iideysiga.
Ruqsad qaadistu ma dhammayn rabshad iyo kadeedis loogu gaysto guryaha sharci darrada ah. Qaar ka mid ah shaqaalaha galmada ayaa sheegay in qaar ka mid ah maareeyayaasha loo yaqaan 'brothel management' aysan ugu yeeri doonin booliiska shaqaalahooda, iyagoo ka soo horjeeda shaqaalaha galmada ee raba inay soo sheegaan dembiyada. Qaarkood waxay yiraahdeen waxaa jira maareeyayaal u arka dambiileyaasha soo noqnoqda inay yihiin macaamiil soo noqnoqda oo laga yaabo inay ceyriyaan shaqaalaha ka cabanaya. Ruqsad bixinta ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in carraduhu ku yaalliin meelaha go'doonsan, kuwaas oo shaqaalaha gelinaya halis.
Shaqada ku saleysan galmada ee dariiqyadu waxay u badan tahay inay sii xumaato kadib go'itaanka kadib, laga yaabo inay ka dhakhso badan tahay waqtiga xaadirka ah, taas oo ay ugu wacan tahay helitaanka siyaabo badan ee si madax banaan loogu shaqeyn karo. Bulshooyinka halkaas oo ay ka shaqeeyaan shaqaale galmo ku saleysan wadooyinka ayaa ka faa'iideysan doona go'aan qaadista, iyaga oo xaddidaya booliiska inay ka hortagaan rabshadaha iyo dambiyada sharciga ah ee leh qawaaniinta quseeya qof walba, oo aan aheyn takoorida loola jeedo dadka iibsashada ama iibinta galmada.
Marka shaqada galmada la xukumo, hawlwadeenada ganacsiga galmada ma sii isticmaali doonaan inay magacyadooda dhabta ah ee shaqaalaha galmada ka dhigaan diiwaanada rasmiga ah sidii gorgortan gorgortan ah. Dhamaan shaqaalaha galmada waxaa dabooli doona sharciga ka soo horjeedka takoorka iyo habab kale oo sharci oo ilaaliya arimaha gaarka ah, caafimaadka iyo badbaadada, kaliya maaha waaxda sharciga.
Furaha dib-u-habeynta sharciga lagu guuleysto ayaa ah in shaqaalaha galmada si iskood ah u hoggaansamaan 'xeerarka ganacsiga caadiga ah.' Shaqaalaha galmada waxay 'codkooda lugaha ugu codeyn doonaan' sharciga ka soo horjeedda sharciga aan sharciga ahayn ama ku xadgudubka arimaha gaarka ah ayagoo ku shaqeeynaya sharci darro. Xeerarka ma ahan in loo maareeyo oo keliya si caddaalad ah, waa inay si habboon loogu dabaqo warshadaha galmada, tusaale ahaan, inay la kulmaan baahiyaha gaarka ah ee shaqaalaha galmada iyo baahiyahooda amniga. Tusaale ahaan, haddii ganacsatada yar yar looga baahan yahay inay u sheegaan goleyaasha maxalliga ah inay shaqaynayaan, shaqaalaha galmada waa inay isku mid sameeyaan. Laakiin golayaashu waa in aan la siin awood ay ku diidaan rukhsadda ganacsiga ganacsiga galmada ay ku shaqeeyaan, ama awood kasta oo dheeraad ah oo ay ku kormeerayaan guriga ama ay ku soo rogaan ganaaxyo ku-dhaqan la'aan.
Sanadkii 2015, New South Wales 'Select Committee on the Regulation of Brothels' ayaa faallooyinka soo socda ka bixisay qaabdhismeedka shati siinta Victoria:
'Diiwaangelinta shaqaalaha galmada waxay bixisaa suurtagalnimada cimri xumada ee shaqaalaha galmada, kuwa badan oo ka shaqeeya warshadaha qayb yar oo noloshooda ka mid ah.'
Khubarada caafimaadku waxay tixgeliyaan in diiwaangelinta shaqaalaha galmada ay u badan tahay in ay yeeshaan natiijooyin caafimaad oo aan caadi ahayn;
Diiwaangelinta shaqaalaha galmada si kale looma cadeeyo faa'iidooyinka yar yar ee laga soo qaatay nidaamka noocaas ah.
Xeerka 1994 wuxuu soo rogay tijaabo bille ah infekshannada la isqaadsiin karo (STIs) iyo baaritaanka dhiigga saddex-biloodlaha ah ee HIV ee ku aaddan shaqaalaha galmada (qaybta STI waxaa loo beddelay saddex-biloodle ahaan sanadkii 2012). Tan waxaa loo sameeyay iyada oo dambi laga dhigay shaqaale galmo ah in ay shaqeeyaan haddii ay ogyihiin in ay qabaan HIV ama mid ka mid ah cudurada kale ee galmada lagu kala qaadi karo (STI) ee ku taxan Xeerarka Shaqada Galmada ee 2016. Sharciga ayaa sheegaya in qofka galmadu yaqaaniin in ay qabaan cudurka. , haddii aysan bixin karin caddeyn difaac ah. In kasta oo natiijooyinka STI iyo tijaabooyinka HIV ay yihiin kuwo farsamo ahaan farsamo ahaan u dhexeeya takhtarka iyo bukaanka, nidaamku wuxuu macnaheedu yahay in shaqaalaha galmada ay qasab tahay inay helaan Shahaadada Imaanshaha. Shaqaalaha galmada waxay muujinayaan Shahaadada Imaanshaha ee shatiga shatiga shatiga leh ama howl wadeenka wakaalada ama, shaqaalaha kiiska madaxa banaan, waxay gacanta ku hayaan hadii ay u baahdaan inay cadeeyaan booliiska inaysan dambi ku laheyn inay la shaqeeyaan HIV ama STI.
Shirkadaha shatiga leh ee shatiga leh iyo wakaalada weheliyaasha waxaa waajib ku ah inay bixiyaan kondham bilaash ah iyo saliid ku saleysan biyaha oo ay hubiyaan kuwa ka shaqeeya dhismahooda inay haystaan ​​Shahaadooyin Imaanshaha.
Xeerka 1994 waxaa lagu soo saaray dhererka cudurka faafa. Isla waqtigaas, barnaamijyada lagu gudbinayo macluumaadka, cinjirka galmada iyo dhuuxa shaqaalaha galmada ayaa kor loo qaaday waxaana la sameeyay dadaalo wadajedsan si loo hubiyo in adeegyada caafimaadka galmada ay u suurta gasho oo ay saaxiibtinimo u yeeshaan shaqaalaha galmada.
Sharci ahaan ka dib, shaqaalaha galmada waxay soo sheegeen in barnaamijyadan iyo qawaaniinta shatiga shati-siinta ay kor u qaadeen jiritaanka kondhomka iyo shaqaalaha galmada ee taga xarumaha caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, isla waqtigaas xeerarkaas waxay abuureen carqalado ku saabsan dhaqannada nabdoon ee qaybta ruqsadda u leh ee cinjirka loo adeegsan karo caddeyn muujineysa in meeshu tahay marin-hoosaad.
In kasta oo ay jiraan rugo caafimaad oo caafimaad oo dadweyne oo wanaagsan oo ku kala yaal magaalooyinka iyo Fiktooriya, ma bixiyaan caynsanaanta ay u baahan yihiin shaqaalaha galmada. Qaar ka mid ah shaqaalaha galmada waxay sii wadaan inay ku dhibtoodaan helitaanka adeegyada caafimaadka galmada ama, sababao kala duwan awgood, tusaale ahaan, cabsi ah inay la kulmaan dhaleeceyn ama walwal ku saabsan asturnaanta, kuma qanacsana inay sidaas sameeyaan. Qaarkood ma haystaan ​​Medicare sidaas darteed waa inay bixiyaan lacagta baaritaanka STI ama ay u safraan rug caafimaad oo bilaash ah, haddii ay mid ogaadaan. Kala sooca ayaa ka caawinaya adeegyada sidii loo gaarsiin lahaa shaqaalaha galmada ee laga yaabo inay dhibaatooyinkan qabaan. Shaqaalaha galmada ee gobolka Fiktooriya gaar ahaan waxay u baahan yihiin inay ogeysiiyaan Dib-u-eegidda haddii ay dhibaato ku qabaan marin u helka adeegyada caafimaad.
Dhammaan nidaamyada caafimaadku waa inay noqdaan kuwo tabaruc ah oo macluumaadka ka yimaaddaana waa inay ahaadaan sir. Tijaabinta qasabka ah ama qasabka ah waxay xad gudub ku tahay xuquuqda aadanaha; Waxaa jiray soo jeedinno in sidoo kale ay wiiqeyso dadka qaadanaya mas'uuliyadda caafimaadkooda galmada waxayna ku dhiirigelinayaan macaamiisha inay doonayaan inay qaadaan khatarta xisaabtanka ee galmada aan la ilaalin ee ay leeyihiin shaqaalaha galmada 'la tijaabiyay'.
Sidoo kale waa wax aan macquul ahayn in la sameeyo baaritaanno ku saabsan xubinta taranka ee xubinta taranka ee xubinta taranka dumarka ama xubinta taranka haweenka iyadoo aan baahi caafimaad u baahnayn. Ugu yaraan hal xarun caafimaad oo Melbourne ah ayaa joojisay baaritaan gudaha ah oo lagu sameynayay shaqaalaha galmada, si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay waa dhaqan gal gal ah laakiin sababtoo ah ma laha faa iido caafimaad dadweyne.
Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha galmada waxay tilmaameen in baaritaannada STI iyo HIV ay noqdaan wax aan muhiim aheyn isla marka uu qofku isutago. Sidoo kale, kuma adkaan doonto in qashin-qubka loo sameeyo shahaadooyin ama shaqaale doonaya inuu ka fogaado booqashada rugta caafimaad ee aan loo baahnayn inuu mid kale ku helo.
Sababta kale ee looga tagayo baaritaanka khasabka ah ee loo yaqaan STI iyo baaritaanka HIV waa in aan la aqbali karin anshax ahaan, gaar ahaan marka ay jirto caddeyn xoog leh in shaqaalaha galmada ee Fiktooriya aysan gudbin doonin STIs iyo HIV la'aanteed. Taa bedelkeeda, waxaa jira caddeyn ah in shaqaalaha galmada ay leeyihiin caafimaad galmo oo ka wanaagsan iyo dhaqamada galmada oo aamin ah marka loo eego tirada guud. Xarunta Caafimaadka Galmada (Melbourne Sexual Health Clinic) waxay sheegaysaa in shaqaalaha galmada ee ka qeyb galay intii u dhaxeysay 2002 iyo 2011 ay si isdaba joog ah u lahayeen heerar ka hooseeya STIs iyo HIV marka loo eego qiyaasta bulshada guud ahaan. Qiimaha aad u sarreeya ee isticmaalka kondomka (ku dhawaad ​​100%) macaamiisha micnaheedu waa marka shaqaalaha galmada ay ku dhacaan STI, badanaa waxay ka timaadaa kuwa jecel, ma aha macaamiisha. Sida laga soo xigtay Kirby Institute, illaa iyo 2011 ma jirin wax kiisas ah oo ah gabadh shaqaale jinsi ah oo ku shaqeysay ama ku faafisay HIV shaqada Australia gudaheeda.
Mamnuucida dadka la nool HIV ee iibinaya galmada waxay saameyn ku yeeshaan ragga iyo dumarka galmada isku galmooda in kabadan dumisyada sababta oo ah faafida Victoria waa mid aad u yar oo ku urursan ragga khaniisiinta ah. Taasi micnaheedu waa in haweeneyda galmada dumarku shaqeyso galmo aan macquul aheyn oo keliya inay qabto HIV, waxay u egtahay inaysan la kulmaynin macmiil qaba HIV aan la daaweyn si uu u qaadsiiyo, xitaa hadii ay leeyihiin galmo kondham la'aan ah. Mamnuucaan ayaa la hirgaliyay ka hor inta aan la soo bandhigin daawada HIV ee labadaba daweynaysa HIV isla markaana ka hortagaysa gudbinta HIV. Hadda way soo laabatay.
Qaar ka mid ah shaqaalaha galmada ayaa moodaya inay sharci darro tahay in la iibsado ama la iibiyo galmada iyadoon la isticmaalin kondom. Tani waa kiiska New Zealand. In kasta oo qasab ma ahan in la dhaqan galiyo, shaqaalaha galmada NZ waxay yiraahdeen waxay waxtar u leedahay in la diido codsi kasta oo la xiriira galmada kondhomka ah ee macaamiisha.
Daraasado dhowr ah ayaa soo gabagabeeyey in waxa ugu muhiimsan ee shaqaalaha galmada ay u baahan yihiin inay ilaashadaan caafimaadka galmada ugu fiican inay tahay aaminida dhakhtarkooda oo aan dareemayn inay iyagu xukumeen si ay si furan uga wada hadlaan arrimaha galmada. In kasta oo ay had iyo jeer u jirto meel lagu hagaajiyo, haddana adeegyada caafimaadka galmada iyo adeegyada caafimaadka ee ragga iyo khaniisiinta ee Victoria ayaa bixiya tan. Ku habboonaanta adeegyadan loogu talagalay shaqaalaha galmo ee trans ama kuwa aan binary ahayn ee Fiktooriya lama baarin laakiin waxaa jira walwal qarsoon.
Go'aaminta waa in ay bixisaa jawi u suurta galinaya dhamaan shaqaalaha galmada in ay helaan adeegyo caafimaad oo dhameystiran, oo aan aheyn kaliya hal qeyb ee warshadaha. Xeerarka iyo go'aannada maalgelinta ee dowladda waa inay tan taageeraan iyagoo hubinaya inay jiraan xarumo caafimaad oo ku filan oo bilaash ah oo leh shaqaale dhaqamo kala duwan oo si wanaagsan u tababaran.
Xayeysiinta shaqada galmada waa inay kujirtaa laysan run ah ama nambarka dhaafitaanka oo ay buuxiyaan tilmaamahan.
sharrax adeegyada la bixiyo;
baahin ama telefishan;
Ku dhiirigali qofka inuu shaqo raadsado sidii galmada oo kale
ku kiciyaan qofka inuu shaqo ka raadsado xarun wakaaladeed ama waardiye;
isticmaal ereyo muujinaya in duugista la bixiyay;
tixraac midabka, midabka, ama asalka qowmiyadeed ee bixiyaha adeegga;
tixraac caafimaadka, ama tijaabada caafimaad ee uu sameeyo adeeg bixiyaha.
kaliya leh sawirro laga qaado garbaha dushooda;
ka yaraato 18cm x 13cm, marka laga reebo haddii bannaanka dibedda laga leeyahay;
Sharciga ku xadidaya muuqaalka jirka inuu noqdo “madaxa iyo garbaha” xayeysiisyada tooska ah waxaa loogu talagalay in bulshada laga ilaaliyo xayeysiinta xun. Haweenka galmada gaar ahaan waxay ku yiraahdeen diiwaanka in waqtigooda la lumiyey iyagoo sharraxaya waxyaabaha ku saabsan adeegyadooda iyo muuqaalkooda macaamiisha ay tahay inay ku xayeysiistaan.
Shaqaalaha galmada waxay muujiyeen walaac ah in mamnuucista xayeysiinta shaqaalaha ay tahay midab takoor, in la dhimayo xulashooyinka ku saabsan halka laga shaqeynayo iyo in lagu dhiirigaliyo dhinac saddexaad in ay siiyaan shaqaale shaqo galmo sharciyeed. Kala-soociddu waxay la macno tahay in xeerarka xayeysiinta eex-kala-sooca la adeegsan doono.
Dhamaan iibinta aalkolada iyo isticmaalkooda ayaa hada laga mamnuucay goobaha ganacsiga. Mamnuucidda ayaa looga golleeyahay in lagu dhiirrigeliyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha galmada iyo in la yareeyo buuqa bulshada iyada oo la joojinayo dhaqanka aan la jecleysan ee khamriga. Isla mar ahaantaana, waxay u badan tahay inay ka dhigto carraduhu inay soo jiidasho yaraadaan oo ay ka celiyaan inay ballaariyaan si ay u noqdaan goobo guud oo madadaalo ah. Shaqaalaha galmada waxay muujiyeen figrado kala duwan oo tan ku saabsan taas oo ku xiran sida ay u qiimeeyaan halista iyo faa'iidooyinka aalkolada goobta shaqada. Qaarkood waxay yiraahdeen waxay kordhin kartaa xaddiga shaqaalaha aan mushaharka qaadan inay kula macaamilaan macaamiisha. Qaar kale waxay yiraahdeen waxay ka dhigeysaa mid caadi ah oo jawi deggan oo u horseeda macaamiisha inay sii dheeraadaan sidaa darteedna ay kharash badan ku bixiyaan. Waxaa taa ka duwan, dadka kale waxay ka walwalaan inay qarash gareeyaan. Mulkiilaha Brothel sidoo kale heshiis ma uusan gelin. Daroogo yaryar ayaa guud ahaan taageeray xayiraadda, halka meelaha waaweyni ay doonayaan in laga saaro.
Qofkastaaba wuxuu oggol yahay in ugu yaraan qaar ka mid ah aalkolka ay ku jiraan waxyaabaha sida xafladaha shaqaalaha.
Ragga la aqoonsaday iyo meelaha ka shaqeynta jidadka kama shaqeeyaan Fiktooriya dhexdeeda. Isbedelada sharciga iyo imaatinka taleefannada gacanta iyo warbaahinta bulshada ayaa la sheegay inay shaqada guurka labka ah u beddeleen xiriirrada iyo kicinta internetka. Transmen iyo haweenku waxay ka shaqeeyaan dhamaan warshadaha galmada sidoo kale waxay qabtaan dad badan oo dheecaano jinsi ah.
Shaqaalaha lab waxay yiraahdeen way diidaan dhillaysiga sababta oo ah waxay ku qasbanaadeen inay shaqooyin kala wareegaan iyagoon wax dammaanad ah ka qaadin macaamiisha, bixinna guddiyada sarsare isla markaana ay kula tartamaan shaqaalaha kale buugaagta. Baahida loo qabo shaqada galmada ee waddooyinka ayaa sidoo kale la kala diray maaddaama doorbididdii macmiilku ay u weecday 'wax ka iibsashada guriga' maxaa yeelay way ka sir badan tahay, way fududahay oo, iyada oo aan la bixin kharashyada komishanku, waxay ku siisaa qiime ka wanaagsan lacag. Xiriirka tooska ah ee khadka tooska ah ee macaamiisha waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay amaan tahay maxaa yeelay waxay u saamaxdaa shaqaalaha galmada inay si wanaagsan u baaraan macaamiisha si ay u hubiyaan oo ay ugala xaajoodaan galmada aaminka ah kahor.
Xeerka Shaqada Galmada wuxuu khuseeyaa meheradaha galmada iyadoon loo eegin jinsiga shaqaalaha galmada. Tani waxay ka dhigan tahay in ragga lagu ciqaabi karo iyagoo adeegsanaya ama ku shaqeeya brothel aan ruqsad haysan haddii ay ku arkaan macaamiil gurigooda, saunas ama goobo kale oo galmada ah. Ikhtiyaarada si aad ugu shaqeyso si madaxbanaan oo aamin ah ayaa sii fidi doonta marka sharcigaan meesha laga saaro.
Sababtoo ah ragga iyo haweenka trans ayaa leh fursad aad u sareysa oo ay kula kulmaan macaamiil qaba HIV marka loo eego haweenka qalloocan, helitaankooda ka hortagga HIV iyo adeegyada daryeelka waa muhiim. Tani waxay si gaar ah hadda u tahay in PREP ay dadka ka difaacdo HIV xitaa haddii aan cinjirka la isticmaalin.
Khubarada HIV iyo kuwa u dooda xuquuqda galmoodka labaduba waxay ku doodayaan in baahiyada caafimaad ee galmada ee ragga iyo dumarka aan la jaan qaadi karin shaqaalaha galmada waxaa lagu gaari karaa oo keliya halka ay jirto kalsooni sare iyo kalsooni shaqaalaha kiliinikada iyo halka adeegyada si fudud looga heli karo oo bilaash ah. ama la awoodi karo. Shuruudahan waxaa lagu hanjabayaa dambi ka dhigista shaqaalaha galmada ee HIV ee ku qasbaya shaqaalaha galmada la nool HIV inay si qarsoodi ah u shaqeeyaan oo ay baqaan. Kala-soociddu waxay la macno tahay in dadka la nool HIV ee iibiya galmada ay si wanaagsan u heli doonaan adeegyada ay u baahan yihiin.
Waxaa jira daraasado xadidan oo ku saabsan isticmaalka daroogada ee Victoria warshadaha galmada laakiin daraasado la isku halleyn karo oo laga helay gobolada kale ayaa sheegaya in hoos u dhac ku yimada isticmaalka daroogada ee shaqaalaha galmada. Daraasadda ugu dambaysay uguna ballaadhan ayaa laga sameeyay Galbeedka Australia waxaana la sahamiyey 331 shaqaalaha galmada ee gobolkaas. Kuwa la wareystey waxay metelaan dhammaan noocyada kala duwan, shaqada galmada waaxaha iyo kooxaha luuqadaha. Daraasadda ayaa lagu ogaaday daroogada ugu badan ee sharci darrada ah ee xilligan la isticmaalo inay tahay marijuana.
Go'aaminta shaqada galmada waxay meesha ka saareysaa caqabadaha jira ee waxyeellada u leh adeegyada dhimista ama kaalmaynta isticmaalka maandooriyaha. Waxay sidoo kale yareyn doontaa kalasooca loo geysto dadka daroogada u isticmaala meesha xaaladda shaqada galmada ay caadi ahaan isku urursato faa'iido darrooyinka jira, arrimaha sida daryeelka carruurta, sheegashada dheefaha iyo kireysiga.
Kaliya dhalashada Australia iyo dadka haysta fiisooyinka u oggolaanaya inay ka shaqeeyaan Australia waxay ka shaqeyn karaan warshadaha galmada sharciga ah ee Fiktooriya. Saraakiisha Socdaalka iyo Ilaalinta Xuduudaha waxay baaraan guryaha ganacsiga si loo hubiyo ganacsiyadaas iyo shaqaalahooda inay u hoggaansamaan shuruudaha in dhammaan shaqaalaha ay siinayaan loo shaqeeyaha fiiso sax ah oo muujineysa ogolaanshahaas. Marka qof ka mid ah habsami u socodka u guurida Australia wuxuu isu diiwaangeliyaa sidii nin galmo ah ama wuxuu dalbadaa ka dhaafitaanka sharciga ah, macluumaadkaas waa la duubayaa. Tan waxaa loo qaadanayaa inay ka doorbido horumarka degenaanshaha iyo dhalashada waxayna keenaysaa hanjabaado kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay masaafurinta.
Sannadkii 2012, RhED waxay ku qiyaastay in 50% shaqaalaha galmada ee sharciga iyo warshadaha sharciyeynta ay ka soo jeedaan dhaqamo badan, iyo xitaa tiro intaa ka badan oo ka mid ah shaqaalaha galmada soogalootiga ah ayaa ka shaqeeya waaxda aan shatiga laheyn.
Ma jiro sheeko kaliya oo ku saabsan nolosha shaqaalaha galmada soogalootiga ah. Qaarkood waa khibrad iyo awood, halka kuwa kalena ay la kulmi karaan dhibaatooyin kala duwan. Qaarkood waxay dalka yimaadaan si ay uga shaqeeyaan warshadaha galmada, mararka qaarkoodna waxay galaan deyn la hubo, waxaana jira dad fasaxa shaqada iyo fiisooyinka ardayda oo sharci ahaan kaliya shaqeyn kara 20 saacadood usbuucii. Kuwa kale waxay la yimaadaan qoys ama waxay wax bartaan ka dibna ku biiraan warshadaha galmada goor dambe. Qaar badani waa kuwa mobilada gudahooda ku nool gudaha Australia.
Waxay kuxirantahay waaya-aragnimadooda iyo xaaladahooda sharci, shaqaalaha galmada soogalootiga ah ayaa laga yaabaa inay xadidan yihiin helitaanka adeegyada caafimaadka ee caalamiga ah, aqoonta HIV iyo STIs iyo kartida ay kula gorgortami karaan caadooyinka galmada ee aaminka ah ee macaamiisha. Ilaalin sharciyeed la'aan, waxaa lama huraan ah in dadka qaar lagu khiyaaneeyo xaaladooda shaqo oo ay helaan lacag ka yar sidii loo ballan qaaday. In kasta oo shaqaalaha galmada soogalootiga ahi ay ku shaqeyn karaan xaalado xun oo u nugul addoonsiga deynta iyo ka ganacsiga, waa in aan lagu tilmaamin inay yihiin dhibanayaal tahriibiya ilaa iyo haddii aan qasab laga dhigin. Sharcigu waa inuu xaqiijiyaa in tallaabooyinka loogu talagalay ka hortagga tahriibka aan lagu khaldin karin shaqaalaha galmada soogalootiga ah.
Ku riixida muhaajiriinta qeybta aan shatiga laheyn waxay u horseedaysaa baahi weyn oo galmo aan ilaalin laheyn, CGF badan iyo dhaqan xumo badan oo ka timaada macaamiisha iyo madaxda. Dhamaan qaybaha, soogalootiga ayaa waxaa sii dheer liidata iyadoo laga cabsi qabo inay la kulmaan jaaliyadaha yar yar, iyaga oo aan garanaynin xuquuqdooda, xadidaada luuqadooda iyo soogalootiga ama walaacyada la xiriira fiisaha.
Go'aaminta shaqada galmada ee heer dowlad goboleedku waxay u mari doontaa xoog u suurta galinta shaqaalaha galmada soogalootiga inay kordhiso marin u helkooda goobaha shaqada iyo adeegyada badbaadada leh. Si kastaba ha noqotee, kuma filnaan doonto kaligeed. Dadaallo muhiim ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo si loo taageero shaqaalaha galmada soogalootiga ah ee Fiktooriya si looga faa'iideysto go'aan gaarista. Adeegyada waa in la hagaajiyaa, oo booska u doodidda lagu ballaariyaa qaabab taageeraya shaqaalaha soogalootiga soogalootiga ah kaqeybgalka wadahadallada ku saabsan shaqada galmada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo u ololeynaya fiisooyinka caddaaladda iyo nidaamka magangalyada iyo dejinta takoorista shaqaalaha cunsuriyadda ku leh goobaha shaqada ee Australia.
Maaddaama shaqaalaha galmada soogalootiga ay u badan tahay inay la kulmaan takoor, fiiro gaar ah ayaa loo baahan yahay in la siiyo si loo fahmo khataraha gaarka ah ee ku soo food leh sharci ama siyaasad cusub. Dib-u-eegistu waa inay si taxaddar leh u baartaa talooyinkeeda ku saabsan saamaynta ay ku yeelanayso shaqaalaha galmada soogalootiga ah kahor intaanay u gudbin dawladda.
Sababo la xiriira isdhaafsiga tahriibinta dadka, Xeerka Nidaamka Dembiyada ee Dawlada Dhexe 1995 wuxuu ugu horayn ka hadlayaa tahriibinta dadka, addoonsiga addoonsiga addoonsiga, addoonsiga galmada iyo shaqaalaynta khiyaanada, in kastoo ay jiraan dambiyo ka madaxbanaan Xeerka Dembiyada Fiktooriya ee 1958.
Inta badan riixa ka dhanka ah go'aan-qaadashada ayaa ku saleysan walaac aan sal lahayn oo ku saabsan ka ganacsiga haweenka iyo carruurta ee addoonsiga galmada. Sida laga soo xigtay Booliska Federaalka Australia, shan qof oo keliya ayaa lagu eedeeyay ka ganacsiga tahriibinta warshadaha galmada ee Victoria intii u dhaxeysay 2005 iyo 2016.
Shaqaalaha galmada iyo aqoonyahanada ayaa si isdaba joog ah ugala hadlay jahwareerka shaqada galmada iyo ka ganacsiga dadka. Sida Australiyaanka oo dhami, shaqaalaha galmada waxay rabaan inay soo afjaraan ka ganacsiga tahriibka ee dhabta ah laakiin falanqaynta kooxaha shaqaalaha galmada waxay si joogto ah u muujineysaa in qorshayaasha ka ganacsiga kahortaga jinsiga ay si cadaalad darro ah u bartilmaameedsadaan shaqaalaha jinsiga soogalootiga waxayna noloshooda ka dhigaan mid adag oo halis badan. Waxaa jira caddeyn muujineysa in dowladda ay lacag badan ku bixisay wax ka qabashada tahriibinta galmada marka loo eego sida ay ku saleysan tahay dhacdooyinka ka ganacsiga galmada. Sidaas darteed, NGO-yada ka ganacsiga tahriibinta ee aan haysan kiis kiis yar ayaa u weeciyay tamartooda iyo lacagtooda canshuur bixiyayaasha si ay uga ololeeyaan shaqada galmada sababta oo ah waxay u tixgeliyaan mid aan lagaran karin tahriibinta. Go'aamintu kama qaadayso awoodda booliiska Federalka Australia iyo dhiggooda gobolka si wax looga qabto tahriibinta dadka. Xaqiiqdii, markii shaqada galmada la xukumo, tahriibku wuxuu noqdaa mid muuqda oo ka sii warbixin kara shaqaalaha galmada kale. Marka la soo gabagabeeyo sharci darrada, warshadaha dhulka hoostiisa ku jira, shuruudaha ay u badan tahay tahriibinta iyo dhiigmiirashada ay u badan tahay inay dhacaan ayaa si weyn hoos loogu dhigi doonaa.
Ruqsadsiinta shaqada galmada looma tixgelin doono jawaab celin sharci dejin ah. In ka badan hal qarni, nidaamyada u baahan ruqsad siinta shaqaalaha galmada ama dhillooyinka ayaa si isdaba joog ah u fashilmay - inta badan xukumadihii mar hore lahaan jiray shatiyada ruqsad ayaa laga dayriyey. Maaddaama inta badan shaqaalaha galmada ahaanta aan shatiga haysan, shuruucda dambiyada ayaa weli shaqeynaya. Nidaamyada shatiyada waa qaali oo waa adag tahay in la maareeyo, marwalbana waxay dhaliyaan koronto aan sharciyeysnayn. Markaa, shati-bixinta ayaa khatar ku ah caafimaadka bulshada.
Shaqaalaha galmada waxay si joogto ah u yiraahdaan in dambi la'aantu keento buufis isla markaana ay qatar gelisaa midab kalasooc, rabshad, sharaf dhac, diidmada qoyska iyo yareynta fursadaha dhaqaale iyo bulsho. Waxay kaloo khatar gelisaa carruurta shaqaalaha galmada waxayna ku xadgudbi kartaa shaqaalaha galmada ee tusaale ahaan sharciga qoyska, guriyeynta ama kiisaska probate.
Sharciga hadda jira wuxuu ku hanjabayaa asturnaanta sababta oo ah waxay u baahan tahay shaqaalaha galmada inay siiyaan macluumaadkooda shaqsiyadeed ganacsatada galmada, booliska, golayaasha deegaanka iyo / ama BLA. In kasta oo macluumaadku aanu ahayn mid dadweyne, haddana shuruudan ayaa wali loo arkaa mid faafisa oo khatar ku ah shaqaalaha galmada.
Qaar ka mid ah shaqaalaha galmada waxay doonayaan sharci u sahlaya inay si qarsoodi ah u shaqeeyaan qaar kalena waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan macluumaad duruufaha qaar. Tani waxay caqabad ku noqonaysaa go'aan qaadashada maxaa yeelay sharcigu wuxuu u baahan yahay ganacsatada kale ee sharciga ah iyo adeeg bixiyaasha inay bixiyaan macluumaad ku habboon shuruucda ganacsiga ee caadiga ah. Waxay cadaatay in guusha xukunka la gaarey ay kuxirantahay u hogaansanaanta shaqaalaha galmada sharciyada ganacsiga ee cadaaladda ah. Fikradaha shaqaalaha galmada ee mowduucan ayaa muhiimad gaar ah leh maxaa yeelay booliiska iyo golayaasha deegaanka ayaa ku cadaadin doona dowladda inay siiso awood ay ku soo aruuriso magacyo badan oo dadka ka shaqeeya warshadaha galmada. Bilayska ayaa gaar ahaan ku adkaysanaya inay awoodaan inay baaraan cidda qaban kara qashin yar si loo yareeyo suurtagalnimada ku lug lahaanshaha dambiile.
Dib-u-muujinta shaqada galmada inta ay shaqadu fureyso fursado cusub oo lagu go'aamiyo shaqada galmada. Tusaale ahaan, xukunnadii hore iyo diiwaanadii kale ee magacaaba shaqaalaha galmada, oo ay kujirto diiwaangelinta SWA ee hadda jirta, waa in la baabi'iyaa.
Go'aan qaadashada kadib, Victoria Police ma sii ahaan doonto wakaalada hogaaminta fulinta sharciga ee la xiriira warshadaha galmada: qorsheynta, amaanka goobta shaqada iyo masuuliyiinta caafimaadka ayaa mas'uul ka noqon doona. Sidii aan horayba u soo sheegnay, guusha guurguurku waxay kuxirantahay hayadahan oo kula dhaqmaya ganacsiyada galmada isla aaminaada wanaagsan ee ay kula dhaqmaan ganacsiyada kale. Sharciga cusub waa inuu hubiyaa in masuuliyiinta noocaas ahi aysan takoorin warshadaha galmada waana inay yareeyaan suurtagalnimada musuqmaasuqa ka dhex jira.
Waagii hore, dawladdu waxay kormeertay warshadaha galmada iyada oo ay wehelinayaan Guddi Lataliye Wasiiro ah oo ka kooban xirfadlayaal caafimaad iyo samafal, hey'ado dowladeed iyo xoojinta sharciga. Waxay siisay fursad lagu weydaarsado macluumaadka oo lagu wacyi galiyo oo looga doodo dowladda arrimaha ku saabsan arrimaha galmada sidii ay wax u dheceen. Tusaale ahaan, shuruudaha baaritaanka STI-da ayaa la beddeley bil kasta illaa saddex-biloodle ahaan natiijada ka soo baxday guddiga. Si kastaba ha noqotee, xubnaha qaarkood waxay yiraahdeen MAC 'ilkaha' way ka tagtay oo waa la kala diray 2014. Gudiga dib ayaa loo soo noolayn karaa ama qaab cusub oo loogu talagalay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo warshadaha galmada ayaa la abuuri karaa.
Si kastaba ha noqotee saamaynta go'aan gaadhista ayaa lala soconayaa, ilaha waa in loo diyaariyaa cilmibaaris joogta ah, cilmi baaris anshaxeed. Marka la barbar dhigo NSW, waxaa jirtay lacag yar oo aruurinta macluumaadka saxda ah ee ku saabsan shaqada galmo ee Fiktooriya. Sharci ahaan ka dib waxaa jiray baaritaano ay sameysay wakaalado iyo aqoonyahanno kala duwan, laakiin illaa 2015 waxay u muuqatay inay hoos u dhacday, taasoo dhalisay farqi weyn oo xagga aqoonta ah. Baarista galmada waxay ku shaqeysaa anshax ahaan iyo u gudbinta macluumaadkaas dowladda iyadoo aan la abuurin dhaleeceyn waa caqabad adag. Waxaa la sameyn karaa oo keliya haddii shaqaalaha galmada ay xarun u yihiin cilmi baarista halkii ay ka ahaan lahaayeen maadooyin kaliya. Wax kasta oo go'aan u egyahay sida Fiktooriya u egtahay, waa in ay taageeraysaa isku xirnaan, qorshe cilmi baaris oo si habsami leh loo soo saaray haddii la doonayo in lagu bixiyo natiijooyinka ugufiican.
Hay'ado badan ayaa bixiya adeegyo caafimaad iyo daryeel samafal ah oo la siinayo iyo shaqaalaha macluumaadka galmada. Qaarkood waa kuwo ay dowladdu bixiso ama hay'ad samafal ah halka kuwo kalena ay tabaruc yihiin
Faylasha Casaanka Inc.
Feylasha gaduud waa adeegaha galmo ee hogaamiya asxaabta amaanka shabakada ee loogu talo galay shaqaalaha galmada Australia si balaaran. Faylasha gaduudan waxay siisaa habeyn intarnetka loogu talagalay shaqaalaha galmada ee Australia inay ku xirmaan, isku xiriiraan oo ay isgaadhsiiyaan midba midka kale si looga caawiyo dhisida dareenka bulshada.
Kheyraadinta caafimaadka & waxbarashada (RhED), oo ah barnaamij ka socda Star Health, waa adeeg loogu talo galay warshadaha galmada, iyadoo laga bixinayo adeegyo caafimaad oo ku saleysan barnaamiyada gobolka oo dhan
Dib-u-habeynta Shaqada Galmada ee Fiktooriya
Sharciga Dib-u-habeynta Shaqada Galmada ee Victoria waa koox u doodid ka kooban shaqaale jinsi iyo xulafooyin u dooda sinaanta sharciga hortiisa dhammaan shaqaalaha galmada ee Fiktooriya.
Adeegga Sharciga ee St Kilda
Adeegga Sharciga ee St Kilda wuxuu siiyaa caawimaad xagga sharciga ah oo bilaash ah shaqaalaha galmada wadooyinka ee ku saabsan aftahanimada iyo lacagaha la xiriira.
Dhismaha St Kilda
St Kilda Gatehouse waa hay'ad ku saleysan caqiido inay ka go'an tahay taageeridda kuwa ugu nugul St Kilda.
Vixen Collective waa ururka kaliya ee ka shaqeeya arrimaha galmada ee Victoria. Hadafyadooda iyo shaqadooda waxay ku hormarinayaan dhaqanka, sharciga, aadanaha, shaqada iyo xuquuqda madaniga ah ee dhammaan shaqaalaha galmada.
Shaqaalaha galmada waxay sidoo kale adeegsadaan adeegyo '' guud ahaan '' sidoo kale, dabcan. Shaqo ka-joojinta shaqada galmada micnaheedu waa in shaqaalaha galmada si wanaagsan loola dhaqmo oo ay awoodaan inay ku helaan adeegyada ay uga baahan yihiin cosbitaalada, la-taliyayaasha, la-taliyayaasha sharciga, adeegyada daroogada iyo qoysaska iyo adeegyada rabshadaha galmada. Si kastaba ha noqotee, dawladdu waa inay sidoo kale maal galisaa cilmi baaris iyo tababar kor u qaadaya tayada adeegyada.
Fikrad ahaan waa la aqbalay in dhageysiga iyo wax ka barashada shaqaalaha galmada ay muhiim u tahay horumarinta sharci iyo siyaasad wax ku ool ah. Tan iyo markii shaqada galmada la sharciyeeyey, dawladda iyo lacagta samafalka labadaba waxaa si toos ah loogu jihaystay ururada caafimaadka iyo adeega bulshada si wax looga qabto ka ganacsiga galmada iyo rabshadaha, kor u qaadida caafimaadka galmada iyo ka caawinta dadka shaqada galmada. Iyada oo u oggolaaneysa adeegga iyo booska u doodidda in ay xukumaan dhaqamada bulshada iyo adeeg bixiyayaasha dhaqanku, dowladda ayaa faquuqday shaqaalaha galmada, oo ay tahay in ay u doodaan xuquuqdooda iyada oo aan la helin aqoonsi ku filan ama ilo dhaqaale.
Si kastaba ha noqotee, dhowr koox oo ka mid ah shaqaalaha galmada ayaa ku doodaya magaca shaqaalaha galmada qaarna waxay bixiyaan macluumaad tayo sare leh iyo adeegyo wax ku ool ah. Si kastaba ha noqotee, ilaha la'aantooda waxay leeyihiin awood xaddidan oo aan lahayn qaabab kufilan oo lagu hubinayo heerarka daahfurnaanta, isla xisaabtanka iyo xogwarranka ay shaqaalaha galmadu u baahan yihiin. Tani waxay labadaba xaddideysaa waxa ay gaari karaan oo xitaa iyaga ka dhigi kara inay noqdaan goobo aan lagu kalsoonaan karin oo loogu talagalay shaqaalaha galmada.
Marka ay dowladu go’aamiso shaqada galmada, waa inay ku dhaqaaqdaa dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan sida shaqaalaha galmada ee Fiktooriya ay u helaan adeegyada caafimaadka iyo bulshada iyo sida loogu matalayo doodaha naftooda. Dib-u-eegistaasi waa inay si gaar ah ugu taliso in qaab galmo dheeri ah oo ku saleysan adeega galmada iyo samaynta siyaasadaha lagu taageerayo Fiktooriya, iyo inay si gaar ah fiiro gaar ah u siiso soogalootiga, dadka asaliga ah iyo shaqaalaha galmada CALD.
Sharciga hadda jira wuxuu jabinayaa xuquuqda dhammaan shaqaalaha galmada. Qeybta aan sharciyeysneyn, shaqaalaha jinsiga si wax ku ool ah xuquuq uma leh iyo u hoggaansanaanta sharciga waxaa ka mid ah qarash gareynta iyo u hureynta asturnaanta, madax-bannaanida iyo dabacsanaanta, iyada oo aan laga maarmin helitaanka goobaha shaqada ee wanaagsan ama si siman loola dhaqmo sharciga.
Go'aaminta shaqada galmada waa inay u sahashaa shaqaalaha galmada inay helaan goobo shaqo oo aamin ah ayna ku raaxaystaan ​​xuquuqaha asturnaanta iyo madax-bannaanida ay la socoto xuquuqaha u saamaxaya dadka kale inay si nabadgelyo leh u qabtaan ganacsiga, dalbadaan dheefaha daryeelka, si nabadgelyo leh ugu noolaadaan qoysaska ay doorteen, qandaraasyo galaan, hanti urursadaan oo ay helaan garsoor iyo ilaalin habboon booliis. Dawladdu waa inay fahamtaa in go’aamintu ay tahay inay keento qoraalkan dhammaystiran ee xuquuqda iyo faa'iidooyinka loogu talagalay dhammaan shaqaalaha galmada ku dhaqanka iyo aragtida.
Macluumaadkan ku saabsan shaqada galmada iyo sharciga Fiktooriya waxaa laga soo ururiyey liisaska soo socda ee maqaallada, bogagga internetka, warbixinnada iyo warbixinnada. Si loo dhigo mid kooban oo la aqrin karo, lama soo shaacin. Waxaan u mahadcelineynaa qorayaasha waxaan si gaar ah u qireynaa qiimaha ay qoreen oo ay wadaagaan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha galmada iyo baarayaasha si ay u taageeraan doodaha ku saabsan xukunka.
Arimaha Macaamiisha Fiktooriya
Rhed, Mashruuca Star Health.
Arnot, A. Sharcinimada Warshadaha Jinsiga ee Gobolka Victoria, Australia: Saamaynta dibuhabaynta sharciga dhilladu ku yeelato nolosha shaqada iyo nolosha gaarka ah ee haweenka ee warshadaha jinsiga ee Victoria ee sharciga ah. BA (BAARAHA) Xaraashka. 2009.
Laanta Xisbiga Shaqaalaha ee Australiya. Platform 2018 https://www.viclabor.com.au/wp-content/uploads/2018/07/Platform-2018-Web.pdf
Bartle J. Takoorka Maaliyadeed ee ka dhanka ah Dadka Waaweyn - Ganacsatada kaliya Warbixinta Ururka Eros. 2017.
Faa'iidooyinka go'aan qaadashada https://sexworklawreformvictoria.org.au/the-benefits-of-decriminalising-sex-work/
Arimaha Macaamiisha Fiktooriya. Ka shaqeynta Fiktooriya Fiktooriya Warbixin madax-bannaan oo ka socota waaxda 'Victoria Brothel'. 2009.
Arimaha Macaamiisha Fiktooriya. Warbixinta Sannadlaha ah 2018–19.
Chow EP, Fehler G, Chen MY, iyo al. Tijaabinta shaqaalaha galmada ganacsiga ee cudurada galmada lagu kala qaado Fiktooriya, Australia: qiimeynta saamaynta yareynta soo noqnoqoshada baaritaanka. PLoS Mid. 2014; 9 (7) 2014
Dobinson S. Fiktooriya Xaaladda Sharciyeynta warqad aan la daabicin oo ka mid ah dhillooyinka 'Fiktooriya ee Wadajirka ah. 1994.
Donovan, B., Harcourt, C., Egger, S., Watchirs Smith, L., Schneider, K., Kaldor, JM, Chen, MY, Fairley, CK, Tabrizi, S., Machadka Kirby, Jaamacadda New South. Wales. Wershadaha galmada ee New South Wales: Warbixin u socota Wasaaradda Caafimaadka ee NSW. Sydney. 2012.
Donovan B. Shaqaalaha galmada waa la baari karaa marar badan: falanqaynta qiimeynta waxtarka ee Victoria, Australia. Caabuqyada galmada la isugu gudbiyo; 86: 117–125. 2010.
Durant, B Badbaadin ayaa laga xayuubiyay: akhlaaqda suugaanta ee shaqaalaha galmada wadada ee Dandenong. Undated
Edler D. Tilmaamaha Habbashada ugu Wanaagsan ee Caafimaadka Shaqada iyo Badbaadada Wershadaha Galmo ee Australia. http://www.scarletalliance.org.au/library/bestpractise
Harcourt C, S Egger, B Donovan 'Shaqada galmada iyo sharciga', Caafimaadka galmada 2 (3) 121-8. 2005.
Harcourt C. et al. 'Go'aaminta Prostitution waxaa lala xiriiriyaa Daboolista Wanaagsan ee Barnaamijyada Dhiirrigelinta Caafimaadka' 2010. Xarunta Caafimaadka Galmada ee Sydney, New South Wales iyo Xarunta Qaranka ee Cudurka HIV iyo Cilmiga Caafimaadka, Jaamacadda New South Wales, Sydney, NSW
Kim, J Go'aaminta shaqada galmada: caddeynta ayaa ku jirta. HIV Australia. Xajmiga 13 No. 1. 2015.
Shaqada Lab Ragga, Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Lab. pdf https://sexworker.org.au/wp-content/uploads/
Neave, M Ku guuldaraysiga dibuhabaynta sharciga dhillaysiga. Joornaalka Australiya iyo New Zealand ee dambiyada; 21: 202–213. 1988.
O'Mullane, M. Taabashada Saldhigga. Subversion of Intenceive Intent: Xeerarka meheradaha galmada aan laga shaqeyn karin ee dawladaha hoose ee magaalada Sydney. Taabashada saldhigga. 2015.
O'Mullane, M Hoos udhac ujeedo Horumarineed; Xaqiiqda siyaasadaha shaqada galmada: Goorma iyo sida loo dhaqan galiyo, Sydney, taabashada saldhiga taabashada. 2105.
Baarlamaanka Dawlada Dhexe ee Australia. Guddiga Wadajirka ee Baarlamaaniga ee Golaha Dembiyada Australia Weydiiso tahriibinta haweenka ee loogu adeego galmada. 2004
Baarlamaanka Fiktooriya. Gudiga Kahortaga Maandooriyaha. Weydiimaha dadka ee ka ganacsanaya shaqada galmada. 2010
Baarlamaanka Fiktooriya. Baadhis kooban oo ku saabsan Shaqada Galmada iyo Sharciga Wax ka Beddelka Falalka Kale 2011
Waaxda Adeegga Baaritaanka Maktabadda Baarlamaaniga ee Adeegyada Baarlamanka ISSN 1836-7828 Lambarka 122. 2011
McLean, A. Ganacsi Isbeddelaya? Ragga Lab Ragga Ah iyo Internetka. Qiimaynta PhD ee Jaamacadda RMIT 2013
Pyett, P. iyo Warr, D. Haweenka halista ugu jira shaqada galmada: istiraatiijiyado lagu badbaadiyo ', Journal of Sociology, 9 35 (2). 1999.
Quadara, A. Shaqaalaha galmada iyo weerarka galmada ee Australia Rabshadaha, khatarta iyo badbaadada. Xarunta Australiya ee Daraasaadka Weerarka Galmoodka ee 2008.
Rhiannon B. 2008. Adigang Dadka, dhilaysiga iyo daryeelka ka baxsan guriga: Aragtida koox xirfadlayaal daryeelka carruurta ah oo Fiktooriya ah. Caruurta Australia maya. 33 (4): 31-37.
RhED. Qiimaynta Baahiyaha Shaqaalaha Galmada ee Ku Saleysan Wadada Wadada St saacda saacadaha shaqada kadib. 2014
Lacag Warbixinta Shaqaale Jinsiga Soogalootiga iyo Dhaqannada-dhaqamada kala-duwan ah 2012.
Rowe, J, SHANTUSI. Sahaminta HIV iyo Baahida wershadaha galmada ee aan xirnayn. Adeegyada Caafimaadka ee Bulshada Koonfurta gudaha, Melbourne, Australia. SHANTUSI. 2011.
Sandy L Qiimaynta Baahiyaha Bulshada ee barnaamij horumarineed xirfadeed ee shaqaalaha galmada ee Fiktooriya iyo horumarinta shaqada ee shaqaalaha galmada: Machadka Burnet. 2019
Samaranake A, Chen MY, Hocking J, Bradshaw CS, Cumming R, Fairley CK. Sharci u baahan tijaabinta bil kasta ee shaqaalaha galmada oo leh heerar hooseeya oo ah CG waxay xaddideysaa marin u helka adeegyada bukaannada halista badan leh. Wilson DP, Heymer KJ, Anderson J, O'Connor J, Harcourt C. 2010.
Isbahaysiga Scarlet. Mabaadi'da sharciga shaqada shaqada galmada. 2000 (nooca cusub ayaa lahelay) http://www.scarletalliance.org.au/library/principles_2014
Selvey, L., Hallett, J., Lobo, R., McCausland, K., Bates, J., & Donovan, B. Western Australia Daraasadda Sharciga iyo Shaqaalaha Caafimaadka Galmada (LASH). Warbixin kooban oo ka socota Waaxda Caafimaadka Galbeedka Australiya. Perth: Dugsiga Caafimaadka Dadweynaha, Jaamacadda Curtin. 2017.
Sharciga Fiktooriya. Xeerarka Shaqada Galmada ee 2016 SR No. 47/2016 Version oo ay ku jiraan wax ka beddelid sida 1 Oktoobar 2017 Adeegga Baadhitaanka Maktabadda Baaritaanka ee Waaxda Adeegyada Baarlamaanka ISSN 1836-7828 (Daabac) 1836-8050 (khadka tooska ah) Lambarka 12 Oktoobar 2011. https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/sex-work-regulations-2016/002
Shaqada Galmoodka iyo Waxyaabaha Kale ee Waxka Beddelka Sharciga ah ee 2011
Adeegyada Galmada Waxay Diyaariyaan Talada La-tashiga Qorsheynta NSW. Adeegyada galmada dhismaha tilmaamaha qorshaynta. 2004.
Sullivan, B Goorma (Qaar) Dhilleyntu Waa Sharci: Saamaynta Sharciga Dib-U-habeynta Sharciga Shaqada Galmoodka Australia ', Journal of Law iyo Society, vol. 37, Maya. 1, p. 85-104. 2010.
SLambarada WA ayaa sharxay. https://sexworklawreformvictoria.org.au/swa-license-numbers-explained/
Waaxda Caafimaadka WorkCover NSW & NSW. Tilmaamaha Caafimaadka iyo Amniga ee loogu talagalay Brothels-ka ee NSW. WorkCover. 1997.
Guddiga Dib-u-habeynta Sharciga Fiktooriya. Adeegsiga Nidaamyada Sharuucda ee Ka Hortagga Abuurista Dembiyada Qabanqaabiya Khibradaha Sharciyeed iyo Warshadaha. 2020.
Xeerka Shaqada Jinsiga 1994, Xeerka Dambiyada 1958,
Sharciga Caafimaadka iyo Caafimaadka Bulshada 2008,
Sharciga Macaamiisha Australiya iyo Sharciga Ganacsiga Caddaaladda ah ee 2012,
Xeerka Dembiyada Kooban 1966, Sharciga Maamulka Shati-siinta Ganacsiga 1998,
Xeerka sirta ee 1997,
Sharciga Sinnaanta Fursadda 2010,
Xeerka Qolka Qolqolka Qolka, 2016,
Sharciga Qorsheynta iyo Deegaanka 1987 iyo Sharciga Qorsheynta iyo Deegaanka (Qorshooyinka Qorsheynta) 1996 iyo qawaaniinta la sameeyay iyada oo la raacayo sharcigaas.